FBC - Laga Xaafoo Laga Daadhiitti giddu galli gabaa qonnaan bultootaf ijaarramuufi
Laga Xaafoo Laga Daadhiitti giddu galli gabaa qonnaan bultootaf ijaarramuufi
Finfinnee, Ebila 13,2009(FBC) – Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti qonnaan bultoota sababa invastimantiitin buqqa'aniif giddu gala gabaa ijaaruuf dhakaan bu'uuraa kaa'ame.
Lafti ijaarsi irratti gaggeeffamu lafa sadarkaa 1ffaa magaalaa keessatti argamu yoo ta’u, giddu galichis kaaree meetra 7,000 irratti akka qubatu itti gaafatamaan Biiroo Dhimmoota Koominiikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaan ibsaniiru.
Abbaan qabeenyaa tokko immoo lafa kanaan dura misoomaaf fudhatanii turan kaaree meetra 8,000 fedhii isaaniitiin qonnaan bultootaaf akka oolu kan deebisan yoo ta'u, lafa abbaan qabeenyaa kun deebisan irratti Injinar Massalee Hayilee immoo giddu gala gabaa qonnaan bultootaaf oolu kan biraa Birrii miliyoona 20n ijaaruuf waadaa galaniiru.
Gama biraatiin magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti barsiisota lafa mana jireenyaa hin qabne 148 ta'aniif, lafti mana jireenyaa dabarfameefira.
Akkasumas sheediiwwan ijaarsi isaanii xumurame bilookiin 6 ijoollee qonnaan bulaaf akka dabarfamu taasifameera.
Guyyuma kana magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti giddu galli atileetikisii amayyaa fi gamoon mana murtii ijaarsi isaanii xumurame eebbifamanii tajaajilaaf banaa ta'aniiru.
Sirnicharratti qondaaltonni naannichaa, hoggantoonnii fi hawaasni magaalichaa irratti argamaniiru.
Oduuwwan Biroo « Waldaaleen hawaasummaa ijaarsa demokraasii keessatti ga’eesaanii akka ba’atan mootummaan ni deeggara	Keessummoonni fooramii Xaanaarratti hirmaatan Baahirdaar galaniiru »